Doorashadii ka dhacday dalka Iran ee lagu doortay Ebrahim Raisi iyo falcelinta Madaxda waddamada kale ee dunida. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Doorashadii ka dhacday dalka Iran ee lagu doortay Ebrahim Raisi iyo falcelinta...
Doorashadii ka dhacday dalka Iran ee lagu doortay Ebrahim Raisi iyo falcelinta Madaxda waddamada kale ee dunida.
Maraykanka ayaa sheegay inaanay Iran ka dhicin doorasho xor iyo xalaala. Af-hayeen u hadlay Maraykanka ayaa sheegay inaanay Maraykanku sii wadi doonin wadda-hadaladii Nukliyeerka.
Madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin, ayaa ugu hambalyeeyay Madaxwaynaha la doortay ee Iran. Putin ayaa sheegay in wadda shaqaynta Iran ay sii wadi doonaan, ayna kawada shaqayn doonaan horumarka labbada waddan.
Israa’iil ayaa ku tilmaamtay Madaxwaynaha la doortay ee Iran inuu yahay qofkii ugu xagjirsanaa Iran ee loo doortay madaxwayne.
Raysal-wasaaraha Pakistan Imran Khan,ayaa sheegay inay sii xoojin doonaan xidhiidhka ay la leeyihiin Iran, sidda xoojinta nabbada Gobalka, horumarka iyo ka shaqaynta barwaaqada labada dal.
Madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan, ayaa ugu hambalyeeyay Madaxwaynaha la doortay ee Iran – Raisi guusha uu kasoo hooyay doorashada dalkaasi ka dhacday maalintii Jimcihii. Erdogan ayaa sheegay inuu sii xoojin doono wada shaqaynta labada dal. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay inuu garabkiisa yahay intii xilka hayo.
Madaxwaynaha Siiriya Bashar Al-assad? ayaa sheegay ugu hambalyeeyay Madaxwaynaha la doortay ee Iran guusha uu kasoo hooyay doorashada, wuxuuna Sheegay inuu soo xoojin doono wada shaqaynta
Waddamada Qadar, Yeman iyo Kuwait, ayaa siddoo kale u hambalyeeyay Madaxwaynaha la doortay ee Iran, Raisi iyaga oo sheegay inay sii xoojin doonaan wadda shaqanta.
Previous article𝐅𝐚𝐚’𝐢𝐢𝐝𝐚𝐝𝐚 𝐜𝐚𝐚𝐟𝐢𝐦𝐚𝐚𝐝-𝐤𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐨𝐨𝐭𝐚𝐝𝐚 (𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨𝐭)
Next articleFaa’iidada caafimaad ee Baamiyaha (#okra).
Dabley Hubaysan oo Weeraray Duqa Degmada Borama